chii chaunofanira kuisa mumushumo webug?
Kuru Qa Chii Chinofanira Kusanganisira MuDhivhoti Bug?
Maitiro Ekunyorera Yakanaka Bug Chirevo
Kunyora chakakanganisika chakaipa kana chirevo chebug kunotora nzira refu mukuziva nekugadzirisa matambudziko nekukurumidza. Mune ino posvo, isu tinonyora zvakajairika zvinhu izvo zvinowanzo kuverengerwa mu bug bug.
Anokanganisa Chitupa, ID
Chinongedzo chakakosha kwazvo mukukwanisa kureva kuremara kuri mumishumo. Kana chishoma chekuzivisa chishandiso chakashandiswa kudonha zvikanganiso, iyo ID inowanzo kuve chirongwa chakaburitsa yakasarudzika nhamba iyo inowedzera padambudziko rekuremara.
Pfupiso ndeyekutsanangudza kwepamusoro danho rekuremara uye kutadza kwakacherechedzwa. Iyi pfupiso ipfupi inofanirwa kuve chiratidzo chekukanganisa sezvo izvi ndizvo zvinotanga kuona nevanogadzira kana vaongorori mubepa rebug.
Hunhu hwekuremara hunofanira kunyorwa zvakajeka. Kana mugadziri achiongorora chakakanganisika asingakwanise kunzwisisa uye asingakwanise kutevera iwo hurema, saka zvingangodaro kuti mushumo unodzoserwa kumuyedzo achikumbira imwe tsananguro uye rumwe ruzivo rwunokonzera kunonoka kugadzirisa nyaya.
Tsananguro inofanirwa kutsanangura chaizvo matanho ekutora kubereka hurema, pamwe nezvakatarisirwa mhedzisiro uye zvaive mhedzisiro yedanho rekuyedza. Chirevo chinofanira kutaura padanho rekuti kutadza kwakaonekwa.
Kuomarara kwekukanganisa kunoratidza maitiro ekukanganisa hurema iri maererano nekukuvadza kune mamwe masisitimu, mabhizinesi, nharaunda uye hupenyu hwevanhu, zvinoenderana nemhando yehurongwa hwekushandisa. Iwo makukutu anowanzo kuverengerwa uye akaiswa muzvikamu zvina kana zvishanu, zvichienderana nedudziro yesangano.
S1 - Inokosha: Izvi zvinoreva kuti kuremara ndeyekuratidzira yekumisa ine yakanyanya mikana yekukuvara uye haina yekushandira kuti udzivise hurema. Muenzaniso unogona kuve iko kunyorera hakutangi zvachose uye kunokanganisa iyo yekushandisa system kuti ivhare. Izvi zvinoda kutariswa nekukurumidza uye chiito uye gadzirisa.
S2 - Yakakomba: Izvi zvinoreva kuti kumwe kushanda kukuru kwekushandisa kunenge kuri kushaikwa kana kusashanda uye hapana kwekushandira. Semuenzaniso, iyo yekuona mufananidzo application haigone kuverenga mamwe akajairwa mafomati mafomu.
S3 - Zvakajairika: Izvi zvinoreva kuti mamwe mashandiro makuru haashande, asi, nzvimbo yekushandira iripo yekushandisa semhinduro yenguva pfupi.
S4 - Zvizorwa / Kuvandudza: Izvi zvinoreva kuti kukundikana kunokonzera kusagadzikana uye kutsamwisa. Semuenzaniso inogona kuve yekuti pane pop-up meseji maminetsi gumi neshanu, kana iwe unogara uchifanira kubaya kaviri pane bhatani reGUI kuti uite chiito.
S5 - Zano: Izvi hazviwanzo kuremara uye zano rekuvandudza mashandiro. Izvi zvinogona kuve GUI kana kutarisa zvaunofarira.
Kana kukomba kuchinge kwazivikanwa, chinotevera kuona maitiro ekuisa chisarudzo pekutanga. Iyo yekutanga inosarudza kuti nekukurumidza chinokanganisa chinofanira kugadziriswa. Izvo zvinonyanya kukosha zvinowanzoenderana nekukosha kwebhizinesi senge kukanganisa kweprojekti uye pamwe kungabudirira kwechigadzirwa mumusika. Kufanana nekuomarara, kukoshesa kunoiswawo mumatanho mana kana mashanu.
P1 - Inokurumidza: Zvinoreva kukurumidza zvakanyanya uye zvinoda kugadziriswa nekukurumidza
P2 - Kumusoro: Kugadziriswa chinodiwa pakuburitswa kwekunze kunotevera
P3 - Pakati: Kugadziriswa kunodiwa kwekutanga kutumirwa (pane zvese kutumirwa)
P4 - Pasi: Kugadziriswa kunodiwa kwekutanga kutumirwa kana zvinotevera zvinotevera kuburitswa
Verenga zvimwe pamusoro peSeverity maringe Nekutanga
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti hurema uhwo hwakanyanya kuomarara hunotakurawo kukoshesa kwakanyanya, kureva kuti kukanganisika kwakakomba kunoda kukoshesa kukuru kugadzirisa nyaya nekukurumidza sezvazvinogona. Ikoko hakugone kuve nekukwirira kwakanyanya uye kwakaderera kukoshesa kuremara. Nekudaro, hurema hunogona kuve nehuremu hwakaderera asi huve nechakanyanya kukoshesa.
Muenzaniso unogona kunge iri zita rekambani rakaposerwa pachiratidziri chekupaza apo chishandiso chinotanga. Izvi hazvikonzere kukuvadza kwakakomba kune zvakatipoteredza kana hupenyu hwevanhu, asi zvinogona kuva nezvinogona kukuvadza mukurumbira wekambani uye zvinogona kukuvadza purofiti yebhizinesi.
Zuva uye nguva yakaitika kana kushumwa icho chakakosha zvakare. Izvi zvinowanzo shandira kana iwe uchida kutsvaga izvo zvakakanganisika kune imwe kuburitswa kwesoftware kana kubva pakatanga chikamu chekuyedza.
Shanduro uye Kuvaka kweSoftware Pasi Pebvunzo
Izvi zvakakosha zvakare. Muzviitiko zvakawanda, kune akawanda mavhezheni esoftware; vhezheni yega yega ine zvakawanda zvinogadziriswa uye kumwe kushanda uye zvinowedzera kune zvekare vhezheni. Naizvozvo, zvakakosha kuti uzive kuti ndeipi vhezheni yesoftware yakaratidza kutadza kwatiri kurondedzera. Isu tinogona kugara tichireva kune iyo vhezheni yesoftware kuti ibereke kutadza.
Zvekare, izvi zvakakosha, nekuti kana isu tingave tichida kunongedzera kumunhu akasimudza chirema, tinofanirwa kuziva wekubata.
Chaizvoizvo, ese maficha eesoftware application anogona kuteedzerwa kune akasiyana zvinodiwa. Nekudaro, kana kutadza kuchionekwa, tinogona kuona izvo zvinodikanwa zvakaitwa.
Izvi zvinogona kubatsira kudzikisa zvakapetwa zvirevo mushumo mukuti kana tikakwanisa kuziva chinodiwa, saka kana chimwe chikanganiso chakabatanidzwa nenhamba imwechete yekudikanwa, hatigone kuzvitaurazve, kana izvo zvikanganiso zvakafanana.
Zvakabatanidzwa / Uchapupu
Chero humbowo hwekukundikana hunofanirwa kutorwa uye kuendeswa nere ripoti rehurema. Iyi ndiyo tsananguro inoonekwa yerondedzero yechikanganiso uye inobatsira muongorori, musimudziri kuti anzwisise zviri nani hurema.
Muchikamu chino takadzidza kuti ndeapi ruzivo isu atinofanira kunyanya kusanganisira mumugumo mushumo. Kugadzira yakanaka bug chirevo inomhanyisa iyo yakakonzera chikonzero kuongorora uye kugadzirisa kweiyo bug.
Agile muyedzo mabasa uye mabasa
ios 11 kuburitsa zuva uye nguva
Android mafoni ane keyboard 2015
Shocker: Kubatana kukuru kwe5G pakati peT-Mobile neSprint kuri kuendesa kukurasikirwa nebasa kukuru
Walmart inotora paAmazon, Roku, uye Apple neayo ayo emhando yepamusoro-anodhura-mukati meimba kutenderera zvigadzirwa
Performance Kuedza Sisitimu neGatling neMaven
Chii & apos; s mbiri-frequency GPS uye foni yangu inayo here? Yechokwadi bvunzo pane OnePlus 7 Pro vs S10 +
Nhare dzakanakisa dzine IR blaster kune ako ese ekuremya ekuda anodikanwa
Tora Smart Khibhodi yeApple & apos; s classic 9.7-inch iPad Pro pamutengo wakaderera, wakaderera $ 60 (nyowani nyowani)